Iingqekembe zeSinyithi eziSecaleni eziMacala mabini iZinc ingxubevange zenziwe ngeBlue Plating Enamel Coin Badges
Ukutyabeka umbala: igolide yakudala + igolide
Isalathiso sobugcisa: ukutyabeka kabini + i-enamel ethambileyo
Ubuchule, umgangatho ophezulu kunye nokuthembeka ngamaxabiso aphambili enkampani yethu. Le migaqo yanamhlanje engaphezulu kunangaphambili yakha isiseko sempumelelo yethu njengenkampani esebenzayo kubungakanani obuphakathi kwilizwe liphela ngexabiso leChina Ihowuliseyili ye-3D Ilogo ye-Electroplating Double Sided Challenge Coin, Enkosi ngokuthatha ixesha lakho elifanelekileyo usityelele kwaye uhlale ukuze ube nentsebenziswano entle kunye nawe.
Ixabiso le-Wholesale China Challenge Coin kunye ne-3D Coin, sinethemba lokuseka ubudlelwane obuhle bexesha elide kunye nenkampani yakho ehlonishwayo icinga ngeli thuba, ngokusekwe ngokulinganayo, ukunceda kunye nokuphumelela kwishishini ukusukela ngoku kude kube lixesha elizayo.
Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kweemali zemali zaseChina kunye nexabiso lezinto zetsimbi, ukuba ngaba awuqinisekanga ukuba yeyiphi imveliso onokuyikhetha, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi kwaye siya kukuvuyela ukukucebisa nokukunceda. Ngale ndlela siza kube sikunika lonke ulwazi olufunekayo ukuze ukhethe olona khetho. Inkampani yethu ilandela ngokungqongqo "Ukusinda ngomgangatho olungileyo, Ukuphuhlisa ngokugcina ikhredithi elungileyo. ”Umgaqo-nkqubo wokusebenza. Wamkele bonke abathengi abadala nabatsha ukuba batyelele inkampani yethu kwaye bathethe malunga neshishini. Kudala sikhangela abathengi abangakumbi nangakumbi ukwenza ikamva eliqaqambileyo.
Egqithileyo Amacala amabini aYilwayo oCwangcisiweyo oMbane weBheji ye-Soft Enamel yeSikhumbuzo kunye ne-Epoxy Covering
Okulandelayo: Ukubhangiswa kweMali ye-Antique yeNickel yeSikhumbuzo
Izikhonkwane ze-Enamel ezingabizi
Izikhonkwane zeDisney ze-Disney
Iphini le-Gold Lapel
Pin Badge uMenzi